XOG : Kheyre oo ku dhacay dabin loo dhigay Kana wel welsan Gudinta Warqad Xariirka loogu jarayo. | Nabadqaad
Xilli shalay Golaha Shacabka Ra’iisal wasaaraha Soomaaliya Mudane Xasan Cali Kheyre si deg deg ah ugu amray inuu warqad uu kula socod siinayo Go’aanka ka soo baxay Golaha shacabka u diro madaxda Xukuumadda Imaaraadka Carabta ayaa hadana waxaa soo baxaya warar sheegaya in Ra’iisal wasaare Kheyre Arrintaasi ka madax adeegayo.
Warar hoose oo ay Nabadqaad.com ka heleyso Xafiiska Ra’iisal wasaaraha Soomaaliya ayaa sheegaya in Mudane Xasan Cali Kheyre oo cabsi ka muujinayo qaabka uu warqada ugu gudbin lahaa madaxa Xukuumadda Imaaraadka Carabta oo uu ugu sheegay in Guud ahaan dalka laga mamnuucay shirkadooda Ganacsiga ee Dp World.
Imaaraadka Carabta ayaa galaan gal xooggan ku dhex leh Siyaasadda Soomaaliya,waxayna lacago fara badan ku bixisaa sidii loo wiiqaa lahaa Awooda Dowladda hadda jirta ee uu hogaamiyo madaxweyne Farmaajo.
Sidoo kale,wararka ayaa intaasi ku daraya in Ra’iisal wasaaraha oo xiriir dhow la leh Imaaraadka Carabta kana hela dhaqaalo badan uga gudbin lahaa waraaqad loogu sheegay in shirkadooda ganacsiga kala baxaan Soomaaliya.
Imaaraadka Carabta ayaa hadda galaan gal xoogan oo dhanka siyaasadda ka dhex bilaabeysa madaxda ugu sareysa ee Dalka iyo Xildhibaanada,waxayna si ay u kala fur furto u adeegsaneysa lacago xad dhaaf ah.
Xildhibaano iyo Siyaasiyiin caan ah ayaa hadda loo badinayaa iney fursad u noqoneyso go’aanka ka soo baxay Golaha shacabka,islamarkaana ku sameyn karaan dhaqaalo fara badan haddii ay la saftaan Imaaraadka carabta.